लभ डे ड्रेसिङ - E Net Nepal
Home Guest Column Love Special Valentine's Day लभ डे ड्रेसिङ
लभ डे ड्रेसिङ
E NET NEPAL 12:30 AM Guest Column, Love, Special, Valentine's Day,
आपसी अनुराग र समीप्यतालाई थप रोमान्टिक बनाउन भ्यालेन्टाइन डे को अवसरमा अँगाल्ने फेसन शैली अरू समयको भन्दा अझ बढी विशेष हुनुपर्छ रातो रंग ऊर्जा र खुसीको प्रतीक हो। यसले प्रेमको गहिराइ र आपसी अनुरागको उचाइलाई अझ प्रगाढ बनाउँछ। यो दिनको ड्रेस कोडमा रातो रंगको प्रधानता हुनुपर्ने डिजाइनरहरूको कथन छ। रेड स्वेटर, रेड सर्ट वा ड्रेस छैन भने यस पटक स्मार्ट रेड ड्रेसमा लगानी गर्नु उचित हुन्छ। चाहनुहुन्छ भने मरुन, चेरी, ब्रिक रेड, बरगंडी, पिन्क, मजेन्टा वा ओरेन्ज कलर अँगाल्न सकिन्छ। यदि रेड ड्रेस रुचाउनुहुन्न भने केही रेड एक्सेसरिज क्यारी गर्न सकिन्छ। जस्तै रेड कलरको क्लच, रेड लिपस्टिक, रेड शल आदि। पियोर रेडको साटो कुनै राम्रो कम्बिनेसन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तैः रेड एन्ड ह्वाइट, रेड एन्ड ग्रीन, रेड एन्ड ब्ल्याक, रेड एन्ड येलो आदि।
प्रेमको प्रतीक मानिने रोमान्टिक कलर पिन्कमा युवतीहरू अझ गर्लिस महसुस गर्छन्। पिन्क कलरका सबै शेड पपुलर नै छन्। डार्क शेडलाई लाइट शेडका साथमा टिमअप गर्न सकिन्छ। यो कलरमा पर्पल र ह्वाइट मेटालिक एक्सेसरिज सुहाउँदो हुन्छ। पिन्क कलरको एक्सेसरिज ग्रीन कलरको ड्रेसमा उत्तिकै शोभनीय हुन्छ। बार्बी गर्ल लुक प्राप्त गर्न पिन्क ड्रेसका साथमा बेबी पिन्क लिपस्टिक तथा लाइट पिन्क ब्लशर प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ।
ब्लू कलर हरेक स्किन टोनमा सुट हुने कलर मानिन्छ। अतः यो रोमान्टिक मौसममा शालीनता र सौहादर््रताको अनुभूति सिर्जना गर्न ब्लू कलरको ड्रेस पनि उपयुक्त हुन्छ। यो रंगमा गोल्ड, सिल्भर तथा ब्रोन्ज मेटालिक एक्सेसरिज सुहाउँदो हुन्छ, ओरेन्ज र येलो कलरको ड्रेससित ब्लू कलरको एक्सेसरीज म्याचिङ हुन्छ। यो रंगको लुकमा डार्क ब्लू वा रोयल ब्लू आइश्याडो प्रयोग गर्नुपर्छ र ब्रो बोन मुनि पनि यसैको शेड प्रयोग गरी हाइलाइट गर्नु राम्रो हुन्छ। साथमा कन्ट्रास्ट कलरको लिपस्टिक वा लिप ग्लस प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ। चिक्स हाइलाइट गर्न ब्रन्जर प्रयोग गर्नुपर्छ।
ब्राइट कलर भएकाले येलो रंगले सम्पूर्ण पर्सनालिटीलाई निखार्न मद्दत गर्छ। अतः आफ्नो व्यक्तित्वबाट प्रभाव पार्न यो रोमान्टिक मौसममा आफ्नो ड्रेस कोडमा येलो रंग पनि समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यो रंगमा ब्लू, पिन्क एन्ड ब्ल्याक एक्सेसरिज सुहाउँदो हुन्छ। यद्यपि यो कलर प्यालेटका साथमा गोल्ड तथा सिल्भर एक्सेसरिज भने प्रयोग गर्नु हुँदैन। येलो कलरका एक्सेसरिज पर्पल, ब्लू तथा ग्रीन ड्रेससित सुहाउँदो हुन्छ। येलो रंगको प्रयोगमा सफ्ट लुक अँगाल्नु राम्रो हुन्छ। ओठलाई फोकस गर्न डार्क पिन्क लिपस्टिक र सिल्भर ह्वाइट आइपेन्सिललाई गाजलजस्तै प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। यसले मुहारमा एउटा अलग चमक छर्छ।
भी डे ड्रेसिङमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
लुकले आफ्नो व्यक्तित्वलाई उजागर गर्नु आवश्यक छ। अरूले कस्तो वा कुन शैली रुचाउँछन् भनेर पहिरन लगाउनुभन्दा पनि आफू सुहाउँदो र आफ्नो व्यक्तित्वलाई सुन्दर एवं आकर्षक देखाउने पहिरन चयन गर्नु उचित हुन्छ। भ्यालेन्टाइन डे कुनै फेन्सी ड्रेसको कम्पिटिसन नभएको कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।
यदि नर्भस वा लाजको अनुभूति हुँदैछ भने आफ्नो आत्मविश्वास प्रोजेक्ट गर्न ब्राइट बोल्ड कलर प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ। उपयुक्त ड्रेसिङ आवश्यक छ। यदि पिकनिक डेट हो भने जिन्स वा सर्ट र टप वा टि-सर्ट उचित हुन्छ। यदि फमर् ल डिनर हो भने राम्रो खालको वनपिस ड्रेस वा स्कर्ट तथा ब्लाउज उपयुक्त हुन्छ। आफूलाई सुन्दर देखाउने र आफ्नो शरीरको राम्रो पक्षलाई हाइलाइट गर्ने पहिरनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जस्तै- यदि आफ्नो शरीरको तल्लो भागभन्दा माथिल्लो भागलाई हाइलाइट गर्न रुचाउनुहुन्छ भने ब्राइट कलरको टप वा आकर्षक खालको टप पिस लगाउनु राम्रो हुन्छ। के लगाउने भन्ने मामिलामा धेरै नै दुविधामा परियो भने लिटिल ब्ल्याक ड्र्ेस प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। मौकामा विचार पुर्‍याएर यसलाई ड्रेस डाउन वा ड्रेस अप गर्न सकिन्छ। आफ्नो लुकलाई स्पाइसी टच प्रदान गर्न सेक्सी कलरफुल हिल्स तथा सुहाउँदो क्लच र ज्वलेरी प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ। काखी, हात र खुट्टाको वेक्सिङ गराउन बिर्सनु हुँदैन।
पुरुषवर्गका लागि नाइस फिटेड जिन्स र फिटेड सर्ट वा टिसर्टको कम्बीनेसन राम्रो हुन्छ। धेरै दुविधा भएको अवस्थामा डार्क डेनिम जिन्स र नाइस ब्ल्याक फिटेड सर्ट तथा नाइस लेदर सुजको जोडा उचित हुन्छ। ह्वाइट टिसर्ट र डार्क कलर्ड ब्लेजर अर्को राम्रो च्वाइस हुन्छ। सफा दाँत, दुर्गन्धरहित श्वास, सफा नङ, क्लिन फेस, डियाडरेन्ट प्रयोग भएको काखी, आफ्टर शेभको सुगन्ध र टाइडी हेयर स्टाइलसहितको लुक जहिल्यै आकर्षक र सुन्दर हुन्छ।
यो विशेष अवसर हो र यसका लागि नाइस कलरको रोमान्टिक ड्रेसमा तयार हुनु राम्रो हुन्छ। युवतीहरूले एक्सेसरिजलाई भुल्नु हुँदैन। नाइस हाई हिल सुज ट्राई गर्नुपर्छ। यसमा स्ट्यान्डर्ड पम्प, किटन हिल वा वेजेज हुनसक्छ। सकेसम्म स्टिलिटोजबाट बचेको राम्रो हुन्छ। सबै कुरा रेडमा हुनु राम्रो होइन। दुईभन्दा बढी रंगको संयोजन पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन। आफ्नो ड्रेसमा बढीमा दुईवटा रंग प्रयोग भएको होस् भन्ने कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। यो भ्याले न्टाइन डेको अवसर हो। अतः विशेष देखिनुपर्छ।
पिकनिक, लङ ड्राइभ, मुभीजस्ता दिनभरिको क्याजुयल गतिविधिको प्लानिङ छ भने युवतीका लागि जीन्स वा क्याजुयल ड्रेस पाइन्टसित नाइस कलरफुल स्वेटर वा सर्ट टिमअप गरेको राम्रो हुन्छ भने युवकका लागि जिन्स र कार्गो स्टाइलको पाइन्टका साथमा स्वेटर वा नाइस लुक भएको सर्ट राम्रो हुन्छ। क्याजुयल लन्चका लागि पुरुषले स्वेटर तथा सर्टका स्थानमा नाइस क्याजुयल ब्लेजर वा ज्याकेट प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ। युवतीका लागि भने नीलेन्थ वन् पिस ड्रेस वा स्कर्ट विथ हिल्स राम्रो हुन्छ।
यदि भ्यालेन्टाइन डेको रोमान्टिक डेट कुनै राम्रो रेस्टुराँ वा क्लबमा बिताउने योजना छ भने उक्त साँझका लागि हाई स्टाइल ड्रेसिङ उचित हुन्छ। आफ्नो ड्रेसिङ लिटिल ब्ल्याक ड्रेस पनि ट्राई गर्न सकिन्छ। यसका साथमा स्पार्कलिङ रेड बेल्ट र म्याचिङ इयररिङको जोडा बनाउनु उचित हुन्छ। यसबाहेक क्युट लिटिल व्हाइट सल वा लिटिल पिन्क र रेड हार्ट भएको स्कार्फ पनि आकर्षक देखिन्छ। आफ्नी प्रेयसीलाई इम्प्रेस गर्न चाहने पुरुषले भने आफ्नो स्टाइलमा कलर तथा फन एड गर्नु राम्रो हुन्छ। यसका लागि आफ्नो सर्टको ब्रिस्ट पकेटमा रातो रुमाल वा फन रेड सस्पेन्डर्सको प्रयोग पनि उपयुक्त हुन्छ।
डे टाइम इन्डोर
कुनै रेस्टुराँ वा कफी शपमा ब्रेकफास्ट वा लन्च डेट हुन सक्छ।
यो डेटमा ६ इन्च अग्लो हिल वा स्मोकी आइ इफेक्ट प्रयोग नगरेकै उपयुक्त हुन्छ। मेकअप लाइट नै राख्नु राम्रो हुन्छ र सेड्स न्युट्रल हुनुपर्छ। डे मेकअपमा मिनिमल मेकअप प्रयोग गर्नुपर्छ, जसमा मस्कारा, ब्लस र लिप ग्लस उपयुक्त मानिन्छन्। स्टिलिटोजभन्दा वेजेज् हिल्स, थ्री इन्च हिल्स्, किटन हिल्स वा ब्यालेट फ्ल्याट्स राम्रो हुन्छ। फिटेड जिन्सका साथमा थोरै लेस डिटेल वा फ्रिल्स सहितको प्रिटि टप सुहाउँदो हुन्छ। एक्सेसरिजको संयोजन मिलाएसँगै जम्पसुटको प्रयोग पनि उचित हुन्छ। जुत्ताको चयन भने लोकेसनका आधारमा गर्न सकिन्छ। चंकी नेकलेस, पल्र्स वा ड्रेस रिङ्सबाट एक्सेसराइज गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसबाहेक आफ्नो लुकमा हेडब्यान्ड वा हेड स्कार्फलाई पनि समायोजन गर्न सकिन्छ।
यो अवसरमा र्फमल वेयरको आवश्यकता पर्दैन, सुट वा टाई आवश्यक छैन। जिन्स उपयुक्त हुन्छ। विशेष गरी लाइट वास। क्याजुयल सर्ट प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै पिन अप स्लिभ्स, चेक्ड वा स्ट्राइप्ड। ओल्ड ह्वाइट सर्टले पनि काम गर्छ। लेयरिङ ट्राई गर्न सकिन्छ।
यो पिकनिक वा अरू कुनै आउटडोर गतिविधि हुनसक्छ।
यसमा पनि ड्रेसकोड डे टाइम इन्डोर डेटकै जस्तो हुनेछ। यति बेला स्कर्ट, नी लेन्थ वनपिस, म्याक्सी ड्रेस, नी लेन्थ वा शोर्ट आदि लगाउन सकिन्छ। बिग फ्लपी ह्याट, अ हट पेयर अफ सनग्लास उपयुक्त हुन्छ। सनस्क्रिनको प्रयोगलाई छुटाउनु हुँदैन। वेजेज र हिल्सको साटो ब्यालेट फ्ल्याट वा प्रिटि थोङ स्यान्डल प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। यदि हाइकिङ पनि समावेश हुन्छ भने जिन्स वा शोर्ट्सका आरामदायक जुत्ताको प्रयोग उचित हुन्छ।
शोर्ट्स बढी शोभनीय हुन्छ। यदि शोर्ट्समा कम्फर्टेबल महसुस गर्नुहुन्न भने जिन्स प्रयोग गर्न सकिन्छ। रोलअप गरी क्याजुयल सर्ट र सुज प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। जिन्स स्ट्रेट कट् हुनुपर्छ जसले गर्दा रोलअप गर्न सजिलो हुन्छ। यो स्टाइलमा लोर्फस वा कन्भर्स वा अल स्टार्सजस्ता प्लिमसल्स उपयुक्त हुन्छ। सनग्लासमा वेफेरर्स वा एभिएटर सेड्स राम्रो हुन्छ। सन ब्लक पनि आवश्यक हुन्छ।
विशेष अवसरका लागि साँचेर राखेको पहिरन यो अवसरमा बाहिर निकाल्नु राम्रो हुन्छ। एलिगेन्ट लुक चाहने हो भने हेवी ज्वेलरी प्रयोग गर्नु हुँदैन। इयररिङ, ब्रासलेट, ड्रेस रिङ वा नेक पिसमध्ये कुनै एउटा स्टेटमेन्ट आइटम चयन गर्न सकिन्छ। आफ्नो सुविधाअनुसार छ इन्च हिल्स प्रयोग गर्न सकिन्छ। लुकमा भने स्मोकी आई वा ड्रामाटिक आई आकर्षक देखिन्छ। ड्रामाटिक लुकमा यदि आँखा ड्रामाटिक छ भने मिनिमल ब्लस र न्युट्रल लिप्स हुनुपर्छ।
होटल डेटिङ लोकेसन हो भने सुट र टाई लगाउन सकिन्छ। यदि लोकेसन थोरै मात्र र्फमल छ भने र्फमल पाइन्टका साथमा बिना टाई सर्ट र ज्याकेट प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यदि पटक्कै र्फमल भेन्यु होइन भने जिन्सका साथमा ज्याकेट र टि सर्ट प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। ती सबै शैलीमा र्फमल सुज प्रयोग गर्नुपर्छ।
स्रोत: साप्ताहिक(कान्तिपुरको सह-प्रकाशन)
Disclaimer : Content of this post is copied from साप्ताहिक if anyone wants to remove this post from this blog You can always contact us @ e.enetnepal@gmail.com , admin@enetnepal.com .
Tags # Guest Column # Love # Special # Valentine's Day
By E NET NEPAL at 12:30 AM
Labels: Guest Column, Love, Special, Valentine's Day
उनीका लागि र उनका लागि भनेको चाही के हो अलिक बुझिएन नि हौ!! [-(